[Ngaphambi kwesiteshi sase-Anshan] 110-inch i-ultra-clear ikhethini elikhulu/isifunda sebhizinisi phambi kwesiteshi/isiteshi sesitimela/isiteshi sesitimela/ukubukwa kobusuku obuphezulu/i-smart lock floor heating/i-Nordic ins quality ikamelo lokulala elilodwa - I-Airbnb
[Ngaphambi kwesiteshi sase-Anshan] 110-inch i-ultra-clear ikhethini elikhulu/isifunda sebhizinisi phambi kwesiteshi/isiteshi sesitimela/isiteshi sesitimela/ukubukwa kobusuku obuphezulu/i-smart lock floor heating/i-Nordic ins quality ikamelo lokulala elilodwa
Ihlonyiswe ngokucophelela isembozo sendlu yangasese esilahlwayo kanye nenkomishi yamanzi alahlwayo, izinto zehhotela zezinkanyezi ezinhlanu, igumbi lihlelwe kahle kakhulu, lihlotshiswe nge-smart lock, kanye nokushisisa phansi.
Itholakala e-Wanjing City Square phambi kwe-Anshan Station, emaphethelweni ehhotela i-Xiangqing Hotel ne-Centralhe Tower, eduze ne-Anshan Stesheni Sesitimela, i-Anshan Bus Terminal, Umgwaqo Wokuhweba phambi kwe-Anshan Station uhamba ibanga elide, uhlala lapha, asikho isidingo sokukhathazeka ngezitimela ezingekho, cishe imizuzu engu-5 ukuya Esiteshini sase-Anshan, ezokuthutha ezizungezile kulula, isikhungo sebhasi se-Anshan City sisezansi, futhi singafinyelelwa ngokuqondile kuzo zonke izingxenye zedolobha.
Ikamelo linomshini wokuwasha, isiqandisi, i-air conditioner nezinye izindawo zokuhlala. Ebusika, kukhona okokushisisa phansi okwanele, ikhishi elivulekile, umbhede wesitayela sase-Europe ongu-1.8 × 2, i-projector yakho eyintandokazi engu-110-inch, enesikrini esicacile esingu-4k, futhi inenani elikhulu lezinsiza zebhayisikobho ne-TV. I-TV ingalungiswa ukuze ibuke imuvi yakamuva nezinsiza ze-TV.I-inthanethi cafe 27-inch ikhompyutha enejubane eliphakeme ne-wifi engu-100MB, ekhethwe ngokucophelela insipho yomzimba ye-JD, i-shampoo, i-conditioner, njll., elungele uhambo lwebhizinisi, ihhovisi, iholide.
Ikamelo yigumbi lombhede omkhulu elihlotshisiwe lase-Europe, elihlanzekile futhi elicocekile, amashidi namathawula okugeza ashintshwa zonke izivakashi, futhi umbhede we-queen wesitayela sase-Europe unekamelo elidumile lezinkanyezi ezinhlanu, okwenza ikamelo lonke libukeke liyinkimbinkimbi, lihlotshiswe ngelambu elihle lebhola le-Ramtan, elithokomele kakhudlwana.Ngokuhlwa, ungajabulela ukubuka indawo enhle kakhulu yasebusuku e-Anshan. Ungahlala ngasefasiteleni ukuze uxoxe futhi ujabulele ukubuka indawo.
Konke kuhlotshiswe ngezinto zokuhlobisa zezinkanyezi ezingu-5. Isakhiwo sihlomele ngokugcwele ngokuzilawula, ukuzivikela, izifafazi zomlilo, njll. Ukugada kokuphepha kwamahora angu-24, ngokusekelwe ezingeni eliphakeme lendlu.Hlanganisa ukulungiswa kwama-elevator amathathu ukuze ukukhululeke ekulindile kwama-ripples.
Imithetho yokungena: Umuntu ohlala endlini udinga ukubamba ikhadi lakhe likamazisi ukuze angene. Sicela ungabhukhi ngaphandle kwekhadi likamazisi. Kudingeka idiphozithi ye-inthanethi ye-Yuan engu-200. Akukho ukupheka okuvunyelwe egumbini, alikho igumbi lomshado, awekho amaphathi, futhi azikho izingane ezingaphansi kweminyaka yobudala ezivunyelwe.
Uma unemibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho, sicela ukhululeke ukuxhumana nami.